Ny fanomanana ny maraude | Grandir à Antsirabe
Sary : Ny sekoly EPP Ivory talohan’ny fanamboarana sy rehefa vita
Isaky ny alatsinainy alina dia mandeha manatona ireo ankizy matory eny amin’ny lalana ireo ekipa mpilatsaka an-dalambe amin’ny alina. Andao hamantatra ireo fanomanana ataon’izy ireo mandritra iny alina iny.
Aminin’ny 5ora ! miala eny am-piasana daholo ireo ekipa maraude mihazo ny lalana makany amin’ny « Maison de Grandira ». Avy hatrany dia any an-dakozia mikarakara ny sakafo ariva sy ny farilac ary dité, ho an’ireo ankizy matory eny amin’ny lalana.
Mialohan’ny rehetra dia efa manomana hetsika hatao amin’ireo ankizy mandritry ny maraude ireo mpanabe. Lalao maro no aroso amin’izany, toy ny « Raha ianao izao no… ? ».
Misy ihany koa ny fifampiresahana atao in-dray isam-bolana ary fanentanana in-droa isam-bolana. Arakaraky ny isan’ny ankizy, ny fihainoan’izy ireo, ny isan’ny fitsaboana madinidinika atao amin’izy ireo no isafidianan’ireo mpanabe ny zavatra atao.
HAFANAO NY VILANY !!
Tamin’iny alina iny tao an-dakozia dia i Toky ny lohandohan’ny mpisorona. Henan-kisoa sy anana no laoka, nasiana angivy kely, miaraka ain’ny ro matsatso sy lasary voatabia.
roa hafa manomana ny farilac. Ity sakafo izay tena ankafizin’ny ankizy dia ahitana varim-bazaha misy ronono afangaro rano mafana, asiana siramamy kely ary atao marihitra tsara. Malaza eto an-toerana io fanampin-tsakafo io amin’ny fitomboan’ny zaza. Atao anaty tavoahangy avy eo ny farilac sy ny dité. Manjaka tokoa ny firahalahiana ao an-dakozia. Mihirahira, mandihy miaraka amin’ny ngadona. Hita soritra eny amin’ny endrik’ireo akipa ny fahavitrihana
LASA ARY … !
Vita ny fikarakarana, miara-misakafo ny ekipa. Vonona ny handeha ny ekipa rehefa avy nisakafo ka voky tsara iny.
Tamin’io alatsinainy io dia nahitana mpanabe 3, olona roa niofana manokana tamin’ny fanabeazana ara-pananahana antsoina hoe « Pairs éducateurs » ary mpilatsaka an-tsitra-po iray manara-maso. Mba tsy hanelingelenana ny asan’ireo mpanabe ary mba tsy hanakorontanana ireo ankizy dia noferana ho roa ihany ny olona avy ivelany mahazo mandeha maraude. Ireo mpitsidika vaovao dia manao sonia ny fitsipika tsotsotra tsy maintsy arahina (tsy mahazo maka sary, tsy mahazo mizara vola na sakafo, tsy mihinan-kanina na misotro na mifoka, tsy mahazo mamoaka ny mombamoban’ireo ankizy…) ary afaka maka fotoana manokana mialoha miaraka amin’ireo mpanabe raha misy fanontaniana.
Teny an-dalana dia naka olona telo hafa ny ekipa, ny roa amin’izy ireo dia mpitsabo avy ao amin’ny toera-pitsaboan’ny Aromathérapie Sans Frontière. Tena ilaina ny fanampian’izy ireo amin’ny fitsaboana ireo ankizy marary amin’ny alalan’ny fitsaboana voajanahary (raha azo atoa izany)
Feno ny ekipa, mampiditra fanamiana miloko volom-boasary, afaka manomboka ny maraude. Ho lava ny alina miandry azy ireo eny amin’ny lalan’Antsirabe…
Lire aussi : Alakamisy 22 martsa 2018 : fitokanana ny trano fandraisana vonjimaikan’ny fikambanana Grandir à Antsirabe
MG	Ny fanomanana ny nahandron’ny mpikambana
MG	Sary : Ny sekoly EPP Ivory talohan’ny fanamboara…